20 ka mid ah Ciidamadii diley Bin Ladin oo ku dhintey weerar ka dhacay Afagnsitan+Video – SBC
20 ka mid ah Ciidamadii diley Bin Ladin oo ku dhintey weerar ka dhacay Afagnsitan+Video
Dagaalyahanka Taliban ayaa sheegtey masuuliyda dilka 31 askri oo Mareykan ah & 7 ka mid ah ciidamada dawlada Afgaanistaan oo lagu diley diyaarad ay ku soo rideen gudaha wadanka Afgaanistaan.
31 askari ee Mareykanka ah ee weerarkaasi ku dhintey waxaa ka mid 20 askari oo ka tirsan guutada Navy Seals oo si gaar ah loogu xushey dilkii hogaamiyihii Al-Qaacida Osama Bin Ladin.
Diyaarada helicobtarka ah ee la ridey waxaa lagu magacaabaa Chinkook waana mid ka mid ah diyaaradaha ciidamada Mareykanku ay adeegsadaan, iyadoo daabusha ciidamada & dabaabaadka dagaalka, waxaana lagu soo ridey dooxada Tangi oo ka tirsan gobolka Wardak oo dhaca Galbeedka Kabul.
Saraakiisha Mareykanka ee dhanka mukhaabaraadku waxay sheegeen in 23 askari ee sida tooska ah u fuliyey dilkii Osama Bin Ladin in dhawaan ay dib ugu soo laabteen wadanka Afgaanistaan iyagoo ka soo kicitimay saldhigooda ay ku leeyihiin gobolka North Carolina ee ee dalka Mareykanka.
Lama ilaa iyo haatan in Taliban ay si toos ah weerarkan u fulisey aargoosi iyo in kale waxaana la xaqiijiyey in weerarkaasi ay sidoo kale ku dhinteen nin Turjubaan ah, Eeyo ay wateen ciidamada Mareykanka, & tiro kale oo aan la shaacin haybtooda oo ka mid ahaa rakaabka diyaaradaasi.
Dhimashada soo gaartey ciidamada Mareykanka waxay aheyd dhimashadii ugu badneyd ee hal maalin soo gaarta ciidamada Mareykanka ee gulufka dagaal u tagey Afgaanistaan, inkastoo sanadkii 2005-tii 16 askari oo ka tirsanaa ciidamada Mareykanka u ku dhinteen ka dib markii ay isku dayeen inay soo badbaadiyaan afar taliye oo saarnaa diyaarad ay soo rideen xoogaga Taalibaanka.
Dooxada Tangi ee diyaaradan lagu soo ridey waxaa loo yaqaan “Dooxada dhimashada” waxaana ay xudun u tahay weerarada lagu hayo ciidamada shisheeye ee duulaanka ku qaaday wadanka Afgaansitaan.
Ciidamada Mareykanka ee ku sugan dooxadaasi waxay kala kulmaan xoogaga Taalibaan weeraro joogto ah, sidoo kale ciidamadii Midowga Soofiyeeti ee duulaanka ku qaaday wadanka Afgaanistaan sideetimaadkii waxaa halkaasi loogu geystey jab xoogan.
Sarkaal sare oo ka tirsan Ciidamada cirka Mareykanka oo lagu magacaabo Captain Justin Brockhoff ayaa sheegay in ay baaritaan ku hayaan sababta keentey burburka diyaarada.
Geestiisa Afhayeen u hadley Taalibaan oo lagu magacaabo Zabiullah Mujahid ayaa sheegay in xoogagiisu ay dhulka soo dhigeen diyaaradaasi ka dib markii dagaal aad u culus uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Sayd Abad.
Gaashaanbuurto Nato waxay sheegeen in ciidamadoodu ay weerar ku ekeeyeen guri ku yaal deegaanka Sayd Abad halkaasi oo ay kulan ku lahaayeen kooxaha Iska caabinta waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus kaasi oo keenay in dhulka la soo dhigo diyaarada isla markaana ay ku dhinteen 31 askari oo Mareykan ah & 7 Afgaanistaaniyiin ah, sidoo kale waxay sheegeen in 8 ka mid ah kooxaha Talibaan lagu diley weerarkaasi.
Hadaba daawo video ku saabsan diyaaradan la soo ridey ee Chinook oo hawlgal ciidan kaga jirta wadanka Afgaanistaan.
Agoosto 7, 2011 at 8:47 pm
waankufaraxsanahay waxaana filayaa intaas iyo in kabadan in aa maqlo baqtigooda